Fahad Yasin HOP86 (s)election - Page 3 - Politics - Somali Forum - Somalia Online
By Che -Guevara, February 18 in Politics
Waa kaftamaayaa igaarka.
Musharaxa madaxweyne ee kaliya ee u hambalyeeyey xildhibaan Fahad
Musharax Madaxweyne Xasan Cali Kheyre ayaa noqday musharaxii ugu horreeyey iyo kan kaliya ee uu u hambaleeyey xildhibaan Fahad Daahir Axmed oo maanta lagu doortay Beledweyne.
Kheyre ayaa qoraal uu soo dhigay facebook ku yiri “Waxaan u hambalyeynayaa Xildhibaannada lagu doortay magaalooyinka Kismaayo iyo Beledweyne ee ka mid noqonaya Golaha Shacabka ee Baarlamanka Federaalka Soomaaliya. Waxaan Alle uga baryayaa inuu u fududeeyo waajibaadka ka saaran ummadda Soomaaliyeed.”
Qoraalka ayaa waxaa raacsanaa muuqaal ay ka muuqdaan sawirada xildhibaanada maanta la doortay, oo uu ku jiro sawirka Fahad.
Tallaabada uu qaaday Kheyre oo ka duwan xubnaha Golaha Midowga Musharaxiinta, oo uu ka tirsan yahay, ayaa dhalin karta su’aalo horleh oo ku saabsan xiriirka ka dhaxeeya isaga iyo Fahad.
Fahad ayaa xubno badan oo musharaxiin madaxweyne ah waxay ka tirsanayaan cadaadis xooggan iyo dhibaatooyin, waayna u arkaan inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay xadgudubyadii uu Farmaajo dalka ka gaystay shanti sano ee uu madaxweyne ka ahaa.
Kheyre ayaa horey waxaa loogu xantay inuu weli ku xiran yahay Fahad, islamarkaana laga yaabo inuu taageero ka helo haddii uu gadmi waayo Farmaajo.
Waxaa sidoo kale jirtay eedeymo ku saabsan inuu yahay isha Fahad u dhex fadhisay Golaha Midowga Musharaxiinta, oo uu xogtooda uu u gudbiyo, waxaana hambalyadiisa maanta ay xoojineysaa tuhunadaas.
Tallaabo ka duwan Kheyre, waxaa qaaday musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo weerar ku qaaday Fahad kadib markii maanta la doortay.
“Horta Baarlamaankii shalay hor muuqadkiisa la diiday, maanta ka mid noqoshadiisa badbaado ma laga doonay? Dadkii la iska qarinayey, isla sawirkoodu ma loo baahday? Xildhibaanadii taleefanada lagu dhagaysan jiray, garbo buuxis ma laga doonay? horta sow lagama quusan xukun baqdin gelin iyo kalitalis? In halkaa lagu soo dhaco, halgan adag oo naf, hanti, waqti iyo tamar ku kacay ayaa laga soo maray,” ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur.
Xildhibaanadii ugu badnaa oo maanta usoo baxay Farmaajo
Waxaa maanta magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan lagu doortay xildhibaanadii u horeeyay ee deegaan doorashada labaad ee maamulka HirShabelle, waxaana ku soo baxay xubno ay wataan garabka Farmaajo.
Kuraasta lagu doortay maanta Beledweyne oo ahaa lix kursi ayaa waxaa la rumeysan yahay in u gacan gelinta kooxda Farmaajo ay ka dambeeyaan madaxda HirShabelle oo gacan saar la leh madaxweynaha muddo xileedkiisu dhaamaday.
Kursiga 1-aad HOP#086: Waxaa ku soo baxay saaxiibka weyn ee Farmaajo ahna La-taliyihiisa amniga qaranka, Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo sidoo kale hore u ahaa Taliyihii NISA, waxaana kursigaan ka taagneyd dood badan, hase yeeshe ugu dambeyntii waxaa qaatay Fahad.
Kursiga 2-aad HOP#015: Waxaa dib ugu soo laabatay kursigaan Marwo Xiis Xasan Aadan oo hore ugu fadhiday, waxayna kamid ah xubnaha loo xiray ee taageerada ka helay xulafada Farmaajo.
Kursiga 3-aad HOP#008: Waxaa kursigaan kusoo baxay Maxamed Deeq Barre Cumar (Fiyoore) oo ah mulkiilaha Radio Danan ee magaalada Muqdisho, sidoo kale waxaa ninkaan wata kooxda Farmaajo.
Kursiga 4-aad HOP#274: Kursigaan ayaa waxaa kusoo baxay Maxamed Cabdullaahi Xasan Nuux, oo markii hore uu ku fadhiyay, wuxuuna taageero ka helay kooxda Farmaajo, asaga oo aan taageero ka haysan beesha iska leh kursiga.
Kursiga 5-aad HOP#109: Waxaa kusoo baxay Cabdifatax Qaasim Maxamuud oo hore ugu fadhiyay kursigaan, ahna Wasiir kuxigeenka Gaashaandhiga, wuxuuna taageero weyn u yahay Fahad Yaasiin, saaxiibka Farmaajo.
Kursiga 6-aad HOP#074: Kursigan oo ahaa midka u dambeeyay ee maanta la qabtay ayaa waxaa kusoo baxay Cabdikariin Cumar Xuseen, waxaana meesha laga saaray Wasiir kuxigeenkii hore ee Gaashaandhiga Cabdullaahi Colaad Rooble oo ay kooxda Farmaajo ku tuhuntay in uu xiriir la leeyahay qaar kamid ah Midowga Musharaxiinta.
Doorashada Golaha Shacabka ee dalka ka socota ayaa inta badan u muuqata mid magaca ka sidata doorasho, waxaana ku soo baxa dooranayaal hore loo sii ogaa guushooda.
This is broad daylight corruption. In the long run, shyt like this is only going to mess up this Godforsaken country even more
Wax lala yaabo ma'ahan in siyaasiyiin sumacadoodii xumaatay fahad yaasiin laga furfuri waayo, waayo wanaaguu dalkiisa u qabtay yaa xumaantoodii banaanka keenay.
Waxaan la yaabanahay shakhsiyan labadan oday midna samafale sheeganayo midna ina dhagaxtuur waxa maskaxdooda sidaa ba'an u masaxay!!
Koley wax qabad "qarran" waxba kama yaqaaniin sida ka muuqata, balse haday noo sheegi lahaayeen waxa uu beeshooda u dhimay dhaqamadeena soo jireenka ah bay ka mid ahaan lahayd.
Macquul ma noqonaysaa beel waynta usc oo waligood soo dhimanayay haba ugu darnaato sodonkii sano ee lasoo dhaafay oo ay xaq iyo xaq daro kusoo dhimanayeen yaa gabar la waayay fahad yaasiin ugu midoobay ayagoon wax caddayn ah u haynin.
Fahad yaasiin waa hanti qaran madaxwyne kasta oo mustaqbalka yimaadana ku xisaabtami doono.
Wuxuu aamusnaanta sirdoonka lagu yaqaano kusoo maamulay sirdoon hufan oo ugu yaraan aan ajnabi faraha kula jirrin sidii kuwii ka horeeyay oo imaaraad kenyati Ethiopian eu iska maamulanayeen si madax banaan oo saxaafadda u furan.
Fahad yaasiin Waxaa ka muuqata akhlaaq, diin, dulqaad degenaan waji musaamax oo furfuran.
Qofkii cadaalad wax ka yaqaan aragiisaa ku fillan laandheeraha macnihiisu waa intaas ma'ahan beeshaydaa tiro badan ayagoon tayo lahayn.
Maxamed Xasan Cirro: Guddoomiyaha guddiga doorashada wuxuu abuurayaa xasarad cusub oo doorashada lagu jahwareeriyo
Guddoomiyihii hore guddiga doorashada Soomaaliya Maxamed Xasan Cirro ayaa ku eedeeyay guddoomiyaha guddiga heer federal ee doorshooyinka inuu abuurayo xasarad cusub oo lagu jahwareerinayo doorashada golaha shacabka.
“Kursi doorashadiisa horey loo dhameeyay, waa un nuuc xasarad abuur ah. Waqtigii 25-ka bisha wuu dhow yahay, halkii dardar galinteeda iyo dhameystirkeeda xoogga la saari lahaa, in loosoo nooleeyo cabaqado horey looga gudbay waa xasarad abuur,” ayuu yiri Cirro.
Guddiga doorashada ayaa dhexdiisa isku khilaafsan kuraasta uu hakiyay guddoomiyaha guddiga doorashada, waxaana xubnaha kasoo horjeeda arrintaan ay sheegeen inuusan jirin wax fadhi oo gudidigu ka yeeshay arrintan.
Guddiga xallinta khilaafadka doorashada oo fasaxay kursiga Fahad Yaasiin
Guddiga xallinta khilaafaadka doorashada heer federal ayaa fasaxay 6 kursi oo uu ku jiro kursiga uu dhawaan ku guulaystay Fahad Daahir Axmed, la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Farmaajo.
Guddiga xallinta khilaafaadka ayaa sheegay in ay warbixin ka heleen guddiga xallinta khilaafaadka doorashada Hirshabelle, kuwaas oo u sheegay in aanay jirin cabasho rasmi ah oo lagasoo gudbiyay doorashada kuraasta lagu doortay Hirshabeelle.
Guddoomiyaha guddiga heer federal ee doorashooyinka Soomaaliya Muuse Geelle Aadan, ayaa dhawaan kursigaan hakiyay.
Guddiyada doorashada waxaa saameyn ku yeeshay khilaafka siyaasadeed iyo loolanka ka dhaxeeya madaxda ugu sareysa, taasoo keentay in go'aanno is khilaafsan ay guddiyadu soo saaraan.
On 2/21/2022 at 1:17 PM, Miskiin-Macruuf-Aqiyaar said:
8 hours ago, Abdi90 said:
Wixii laga sheegay iyo buun buuninta intaa iska deysid aqriso qoraalada uu ku qori jiray Soomaalitalk labaatan sano ka hor. Aragtidiisa ayaa ka arkeysaa wuxuu aaminsanaa markaas. Aniga waagaas ayaa aqrin jiray. Sanado ka horna waxaaba ogaaday inuu qabo gabar aan ilma habreed nahay ilmaheeda eedadooda.
Maamulka Hirshabeelle oo ka horyimid talaabadii Guddiga FEIT uu kaga reebay Xildhibaanadda Cusub kursiga Fahad Yaasiin
Sabti, April, 02, 2022 (HOL) - Madaxtooyada maamulka Hirshabeelle oo war kasoo saartay go'aankii guddiga doorashooyinka heer Fedaraal ee FEIT ay kaga reebeen kursiga tirsigiisu yahay HOP 086 tirada...
Fahad has a fan. It is pointless for Roble to keep going after this man.
How is this possible? Who excluded him from the list of elected MPs and on what basis?
Guddiga Doorashooyinka Heer Fedaraal oo shaaciyay in dib loogu noqonayo doorashada Afar kursi uu ku jiro kursiga Fahad Yaasiin
Arbaco, April, 6, 2022 (HOL) - Guddiga doorashooyinka heer Fedaraal ayaa goordhaw War rasmi ah kasoo saaray sababahii ay u...
On 4/3/2022 at 2:25 PM, Arafaat said:
There are no legitimate bases